Samsung dia manolotra headphones vaovao miaraka amin'ny Adidas - SmartMe
Ny finday tsy misy tariby Samsung Galaxy Buds Pro dia misy amin'ny loko telo hatreto. Noho ny fiaraha-miasa amin'i Adidas dia hiova izany ary ny orinasa dia hametraka karazana fotsy vaovao vaovao miaraka amin'ny tsipika maintso telo.
Samsung dia mampiditra headphones vaovao
Tsy ny headphone ihany no miandry ny mpanjifa amin'ny 7 aprily amin'ny 19:30. Ho fanampin'ny headphone dia hahita boaty miendrika baseball sy coupon manokana ihany koa ny mpanjifa hahafahany mividy kiraro Adidas Stan Smith amin'ny vidiny fampiroboroboana
Ireo mpampiasa smartphone Samsung Galaxy dia hahazo fidirana amin'ny lohahevitra Adidas Originals rehefa ampiarahina amina telefaona ny telefaona an-tariby. Anisan'izany ny efijery hidin-trano ho azy manokana, ny interface dialer, ary ny app Messages.
Adidas dia nikarakara ekolojia tamin'ny famokarana fitaovana vaovao. Ny tranga dia vita tamin'ny plastika namboarina indray, raha ny headphones kosa dia 20 isan-jato. mampiasa fitaovana aorian'ny mpanjifa. Ny vidin'ny sety manontolo dia PLN 860.
Huawei dia hanolotra ny fiara elektrika voalohany amin'ny 17 aprily!
fiara mandalo, huawei, fizarana voalohany, fiara mandeha herinaratra
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety vao haingana, niaiky ny Tale Jeneralin'ny Huawei fa niara-niasa tamin'ny orinasa mpamokatra fiara telo ny orinasany hamoronana fiara elektrika voalohany an'ny orinasa. Afaka hitantsika ny vokany voalohany tamin'ny asan'i Huaweia tamin'ny 17 aprily! Huawei vonona amin'ny premiere! Ireo mpamokatra ...
Ny fivarotana ny Galaxy SmartTag + dia hanomboka amin'ny volana aprily
galaxy smarttag, Tracker GPS, Samsung
Samsung dia nanambara ny fikasan'izy ireo hampiditra kinova nohatsaraina amin'ny finday Galaxy SmartTag amidy. Hatao hamely ny tsena amin'ny 16 aprily io. Noho ny haben'ny habeny, ny trackers marani-tsaina dia azo ampifandraisina amin'ny lakile, poketra na ...
IPad Pro vaovao ho avy amin'ny herinandro ambony!
paoma, iPad Pro, fizarana voalohany
Araka ny vaovao farany, hiseho amin'ny tsena ny iPad Pro vaovao amin'ny herinandro ambony. Inona no mendrika ho fantatra momba azy io ary inona no azontsika antenaina amin'ny premiere an'ny vokatra Apple vaovao? Manakaiky ny première hoy i Kang, Apple dia ...
Huawei dia hanemotra kely ny famoahana ny andiany P50
huawei, huawei p50, p50, fizarana voalohany
Ny andiany P50 dia andrasan'ny mpankafy Huaweia fatratra. Ny premiere dia hatao tsy ho ela, saingy mbola tsy misy ny fampahalalana ofisialy, ary misy ny tsaho milaza fa efa ho avy tsy ho ela ny Huawei P50 Pro ...
Fandinihana Samsung: Ho malaza be toy ny mpanasana vilia ve ny fanamainana mandeha ho azy?
Research, Samsung, smartthings, fanamainana
Ny fanasana vilia dia mahazatra ankehitriny toy ny vata fampangatsiahana na milina fanasan-damba. Saingy tsy izany foana no izy. Manomboka amin'ny fitaovana izay vitsy no zakan'ny mpanampy an-trano nanao fanasana lovia be ...
Siemens EQ.9 miampy. Siemens dia mampiseho ny masinina kafe marani-tsaina
Fandraisana an-trano, Samsung
Amin'ny fotoana nanjary toeram-piasana ny tranontsika, maro ny olona no diso ny kafe manitra sy manentana. Efa manana faniriana mafy handeha any amin'ny cafe aho. Mandritra izany fotoana izany i Siemens dia manolotra ny milina espresso mandeha ho azy Siemens EQ.9, izay manana ...
Manakaiky kokoa ny premiere an'ny AirTags. Fantatray ny vidiny sy ny refy
airtags, paoma, fizarana voalohany
Efa fantatray ny datin'ny famoahana ireo mpikaroka Apple, AirTags. Ny vidin'ny fitaovana sy ny refy dia niseho teny an-tsena ihany koa. Ho avy tsy ho ela ny première. Ny habe kely sy ny vidiny tsara AirTags dia mpikaroka ao amin'ny Apple izay efa noresahina nanomboka ...
Apple dia miady ny hitazomana ara-potoana ny premiere an'ny iPhone 13
paoma, iPhone, iPhone 13, fizarana voalohany
Apple dia te-haneho an'izao tontolo izao ny iPhone 13 amin'ny volana septambra, izay mazava ho azy, dia misy modely efatra. Betsaka anefa ny famantarana fa mety hihemotra kely ilay première. Apple dia sahirana amin'ny ora sy ny fe-potoana farany ampiasain'ny iPhone 13 ary ...